Xiisada iyo Xamaasada Koobka gobolada Puntland ee maalintii sedaxaad ka socda Garowe – SBC
Xiisada iyo Xamaasada Koobka gobolada Puntland ee maalintii sedaxaad ka socda Garowe
Posted by Webmaster on June 13, 2014 Comments
Waxaa maalintii sedaxaad si dar dar leh uga soconaya Garoonka Kubadda Cagta Mira Awaare ee magaalada garoowe Caasimada Punland koobka gobolada Puntland kaas oo ay ka qeyb qaadanayaan dhamaan gobolada ay ka kooban tahay Puntland.
Koobkan oo ah mid afartii sanaba mar la qabto ayaa waxaa sanadkan uu yahay mid aad u xiiso iyo xamaasad badan waxaana 3dii maalin ee ugu dambeysay garowe laga dareemayay habsami u socodkiisa iyadoo dadweyne farabadan oo ka kala yimid gobolada dalka ay u joogaan Garowe koobkaasi daraadiis.
Galabta oo aheyd galab jimce ah oo aan booqasho kooban ku joogo Garoonka Mira Awaare waxaa ka muuqda xamaasad aad iyo aad u balaaran oo aan la soo koobi karin taas oo ay ku dareensiinayaan ciyaar yahanada ciyaaraya iyo Dadweynaha Kumananka ah ee u fadhiya daawashada xulalka dheelaya iyo natiijada ka soo baxda.
Waxaa galabta la ciyaaray 2 kulan oo min laba xul ah waxaana xulalka ciyaaray ay kala ahaayeen wareegii hore Xulkagobolka Bari Vs Xulka gobolka Ceyn, waxana ciyaartaasi ay aheyd mid aad u xiiso badan.
Weerar iyo weerar celis wax la isku qaadaba waxay u suurta gashay gobolka Bari in uu la yimaado Gool kaas oo quusiyay Xulka gobolka Ceyn sidaasna ay ku dhamaatay ciyaartii xiisaha badneyd.
Ma aheyn ciyaartaas xiisaha badan oo keliya ciyaarta dadku u soo buux dhaafiyeen garoonka, waxaa sidoo kale foda isdaray oo ciyaar kulul oo aan la saadaalin kareynin ay dhexmartay Xulalka Gobolada SOOL VS Mudug.
Wareegii Hore ee Ciyaarta waxaa lagu kala nastay 1 iyo eber oo ay ku hogaamineyso Gobolka Sool, waxaana loo so noqday wareegii labaad, waxay ciyaarta socotaba waxa ciyaartaasi kaarka cas ee ganaaxa ku qaatay ciyaar yahan ka tirsan gobolka Sool balse intaas ugama yareysanin xulka gobolka Sool waxaana ay la yimaadeen Goolkii labaad .
Weerar iyo weera celis ka dib waxa ay ciyaartii ku soo dhamaatay 2 iyo 0 oo ay gushu ku raacday Xulka 10ka ciyaaryahan ku ciyaarayay ee Sool.